6 yekugadzirisa nhau dzaKurume | Zvazvino Zvinyorwa
6 yekugadzirisa yekuvandudza munaKurume
Starts Kurume uye tinazvo nhau dzekunyora semwedzi wega wega. Uku kusarudzwa kwe 6 mazita pakati payo ini ndinosimbisa iwo evanyori venyika vakaita se Victor weMuti, Ana Lena Rivera, Benito Olmo, Javier Cercas naJavier Marías, uye imwe yepasi rose, yeSweden Niklas Natt och Dag.
1 Kuzvitonga - Javier Cercas
3 Vakafa havakwanise kushambira - Ana Lena Rivera
4 Mwanakomana waBaba - Victor del Arbol
6 Huru Dzvuku - Benito Olmo
Fenzi inounza ku Melchor Marin uye zvakare inoidzosera ku Barcelona, kwauchazofanira kutsvaga a blackmail kesi nevhidhiyo yebonde kuna meya weguta. Marín anoenderera mberi achidemba kusawana mhondi dzaamai vake, asi ndozvakaitawo pfungwa yake yeruramisiro uye hunhu hwake mutsika. Saka anozopinda iwo madenderedzwa esimba uko kutonga kwekushora, chinzvimbo uye huwori.
Iyo chikamu chechipiri chetatu nematema matema ayo akatanga ne 1793, yakatariswa Bhuku Rakanakisisa regore muSweden gore rapfuura. Yakarumbidzwa zvikuru nevatsoropodzi nevaverengi. Iye zvino munyori webhuruu ane ropa rebhuruu anodzoka aine nyowani zano rekunyengera, kutsiva uye mhosva ine kumashure kweStockholm yenguva yeiyo French Revolution. Ivo nyeredzi mairi zvakare Mickel cardell, muhondo yehondo ine hukasha yaanoperekedza iye zvino Emil winge, munin'ina waCecil Winge.
Vakafa havakwanisi kushambira - Ana Lena Rivera
A Ana Lena Rivera tinomuziva zvakanaka pano, kunze kweangu semurume wangu. Uye izvozvi anopa nyaya yechitatu ye Nyasha Musande Sebastian, protagonist yemanovel ake Izvo vakafa vanonyarara y Mhondi mumumvuri wako. Mune iyi Nyasha inosanganisirwa se muongorori wekunze wemapurisa uye ichabatana neboka remuchengeti Rafa miralles.
Vachafanirwa kuferefeta InverOriental, kambani yepasi rose yekudyara dzimba, iyo inofungidzirwa kuti yakaita a piramidi chirongwa. Mhosva yacho inova yekudyidzana kana paSan Lorenzo gungwa reGijon vanowana iyo CFO ruoko uye mukuru fungidziro yekubiridzira. Asi ndezvekuti nguva pfupi mushure mekunge mutumbi wakaremara waonekwa uye uine zviratidzo zvekushungurudzwa.
Panguva imwecheteyo Nyasha anoedzawo dzorerazve hupenyu hwako, asi hukama hwake hutsva hunotambura kana murume wake wekare achidzoka kubva kuNew York.
Mwanakomana wababa - Victor weMuti
Víctor del Árbol anodzoka neiri zita nyowani ane protagonist ndiDiego Martín, murume akazviita uye uyo, panguva imwechete, anobva kuchizvarwa chemakumi matanhatu akasvetuka kubva kumaruwa kuenda kuindasitiri yeSpain. Akarambawo mabviro aya, kunyangwe achinzwa asingakwanise kuzvisunungura kubva kwavari, mumvuri wababa vake uye kupokana pakati pemhuri yake nemhuri yePatriota.
Diego anosangana naMartin Pearce, mukoti anochengeta hanzvadzi yake Liria, akabvumirwa kunzvimbo yepfungwa. Martin anoita kunge mukomana ane hanya, asi anoviga chimwe kumeso icho Diego chaachawana nenzira yakaipa kwazvo uye icho chinounzawo divi rake rakaipisisa.
Iyo nyowani nyowani naJavier Marías inotitora isu kuenda 1997 uye ikozvino tarisa kuna Thomas Nevinson, iyo Murume waBerta Isla, iyo inodzokera ku Mabasa epachivande mushure mokunge musipo. Anokurudzirwa kuenda kuguta rekuchamhembe kwakadziva kumadokero kuti anoona munhu, hafu yeSpanish nehafu yekuNorth Irish, vakapinda mukurwiswa neIRA neETA makore gumi apfuura.
Huru Dzvuku - Benito Olmo
Munyori we Turtle inofambisa, iyo inogadziriswa firimu, uye Nhamo yeZuva, apa anotizivisa Detective Mascarell, uyo anoshandiswa kufamba achipfuura nered light district, narcoslas uye dzakaipisisa matumba e muFrankfurt. Rimwe zuva achamanikidzwa kutora kadhi risinganzwisisike uye rakabhadharwa kwazvo.
Ari munzira anosangana ayla, one kuyaruka uyo anoda kutsvaga chokwadi mushure mekufa kwemukoma wake uye kujekesa nyaya dzaakange akabatanidzwa nadzo asati afa. Pamwe chete ivo vachazviisa ivo pachavo mumachinjiko e Yakakura Tsvuku, sangano mumumvuri uyo asina hanya neavo vanopindira mubhizinesi ravo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » 6 yekugadzirisa yekuvandudza munaKurume
David Goodis. 3 firimu kuchinjika kwemanovel ake
Carmen Mola: yake trilogy